တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ချင်းသောင်မြို့တွင် နိုင်ငံတကာလေဆိပ်သစ် ဖွင့်လှစ် - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ချင်းသောင်မြို့တွင် နိုင်ငံတကာလေဆိပ်သစ် ဖွင့်လှစ်
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ဆန်းတုန်းပြည်နယ် ချင်းသောင်မြို့ရှိ ချင်းသောင် ကျောင်းတုန်း နိုင်ငံတကာလေဆိပ် အဝင်အထွက်ပေါက်အား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ချင်းသောင်၊ ဩဂုတ် ၁၂ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ဆန်းတုန်းပြည်နယ်ရှိ လေဆိပ်သစ်ဖြစ်သော ချင်းသောင် ကျောင်းတုန်း နိုင်ငံတကာလေဆိပ် (Qingdao Jiaodong International Airport) အား ဩဂုတ် ၁၂ ရက်တွင် တရားဝင်လုပ်ငန်းလည်ပတ်လျက်ရှိကြောင်း ချင်းသောင် လေဆိပ်အုပ်စုက ပြောကြားခဲ့သည်။အဆိုပါ လေဆိပ်အား ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ခရီးသည်တင်လေယာဉ်ဖြစ်သော Airbus A380 အပါအဝင် လေယာဉ်ကြီးများ လက်ခံနိုင်စွမ်းပေါ်မူတည်၍ တရုတ်နိုင်ငံ၏ လေဆိပ်အဆင့်အတန်းတွင် အမြင့်ဆုံးဖြစ်သော 4F အဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြောင်း လေဆိပ်အုပ်စုက ဆိုသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ဆန်းတုန်းပြည်နယ် ချင်းသောင်မြို့ရှိ ချင်းသောင် ကျောင်းတုန်း နိုင်ငံတကာလေဆိပ်အား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
လေဆိပ်သစ်အား စတင်လည်ပတ်နေပြီဖြစ်သဖြင့် Qingdao Liuting နိုင်ငံတကာလေဆိပ်အား ပိတ်ထားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။လေဆိပ်သစ်၏ ပြီးစီးသွားပြီဖြစ်သော ပထမအဆင့်မှာ ၁၆.၂၅ စတုရန်းကီလိုမီတာခန့်ရှိပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာ ယွမ် ၃၆.၀၄ ဘီလီယံ နီးပါး (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅.၅၆ ဘီလီယံခန့်) ရှိသည်။
အစီအစဉ်အရ ယင်းလေဆိပ်သည် ၂၀၂၅ ခုနှစ်မတိုင်မီ နှစ်စဉ် ခရီးသည်ပေါင်း ၃၅ သန်း၊ ကုန်စည် ၅၀၀,၀၀၀ တန် ၊ လေယာဉ် အတက်အဆင်း အခေါက်ရေ ၃၀၀,၀၀၀ ထိ စွမ်းဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ လေဆိပ်သည် တရုတ်နိုင်ငံရှိ မြို့များနှင့် ဒေသများ အပါအဝင် ပြည်တွင်း ခရီးသွားနေရာ ၁၃၀ ခန့်ရှိသော ချင်းသောင်မြို့နှင့် ချိတ်ဆက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာနှင့် ဒေသတွင်း လေကြောင်းလိုင်းများသည် ချင်းသောင်မြို့အား ဂျပန်နှင့် တောင်ကိုရီးယား အပါအဝင် ပြည်ပနိုင်ငံများမှ မြို့ ၅၀ ခန့်နှင့် ချိတ်ဆက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
အဓိကဘက်စုံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အချက်အချာဖြစ်သော လေဆိပ်သည် ခရီးသည်မျာအား မြေအောက်ရထားနှင့် မြန်နှုန်းမြင့်ရထားဝန်ဆောင်မှုများသို့ သွားရောက်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်သွားထားသည်။
လေးဆိပ်ဖွင့်လှစ်ပြီးနောက် အထူးသဖြင့် ပြည်ပကုန်သွယ်မှုကဏ္ဍရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသမားများအတွက် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ ၎င်းတို့၏မိတ်ဖက်များထံ သွားရောက်ရေး ပိုမို အဆင်ပြေစေမည်ဖြစ်ကြောင်း ချင်းသောင်မြို့ အခြေစိုက် တောင်ကိုရီးယားမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဖြစ်သူ Seol Kyu Jong က ပြောခဲ့သည်။
လေဆိပ်သစ်မှ အကျိုးကျေးဇူးရှိစေမည့် ထောက်ပံ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကွန်ရက် တိုးချဲ့မှုသည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကုန်ကျစရိတ်အား သိသိသာသာလျှော့ချပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ တောင်ကိုရီးယား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်က ဆိုသည်။
လေဆိပ်၏ ဒုတိယအဆင့် စီမံကိန်းအား ဩဂုတ် ၁၂ ရက်တွင် စတင်ခဲ့ကြောင်း၊ စီမံကိန်းပြီးစီးမှုပေါ် မူတည်၍ ကျောင်းတုန်းလေဆိပ်အနေဖြင့် ၂၀၄၅ ခုနှစ်မတိုင်မီ နှစ်စဉ် ခရီးသည် ၅၅ သန်း၊ ကုန်စည် တန် ၁ သန်းနှင့် လေယာဉ် ပျံတက်ခြင်းနှင့် ဆင်းသက်ခြင်းများအား လက်ခံဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
China Focus: New international airport opens in east China’s Qingdao
QINGDAO, Aug. 12 (Xinhua) — The Qingdao Jiaodong International Airport,anew airport in east China’s Shandong Province, officially went into operation Thursday, the Qingdao Airport Group said.
The airport is ranked as 4F, the highest in China’s airport class capable of handling large aircraft, including the Airbus A380, the world’s largest passenger airliner, the group said.
The airport’s second-phase project also kicked off Thursday. Upon completion of the project, Jiaodong airport will be able to handle an annual passenger throughput of 55 million,acargo throughput of 1 million tonnes, and 452,000 aircraft takeoffs and landings by 2045. Enditem
1-Aerial photo shows terminal of the Qingdao Jiaodong International Airport in Qingdao, east China’s Shandong Province, Aug. 11, 2021. (Xinhua/Li Ziheng)
2-3- Aerial photo shows the Qingdao Jiaodong International Airport in Qingdao, east China’s Shandong Province, Aug. 11, 2021. (Xinhua/Li Ziheng)